Nivoaka ihany ny hanaovana ny fifidianana kaominaly: 27 novambra. Efa nahabe resaka ny sasany ny fanapahan-kevitry ny fitondrana. Tsy inona fa ny amin’ny hoe mbola hifampidinihana na hifampierana ny raharaha. Nahoana no ho tonga amin’izany?
Tsy izany ve no anisan’ny ilàna ny fifidianana mpitondra amin’ny fifandimbiasam-pahefana hoe ara-pomba demokratika? Nampindramina fahefana hanapa-kevitra amin’izay efa nofaritan’ny lalàna, hanatanteraka izay fanamby nifidianan’ny vahoaka azy…
Saika ambonin’ny lalàna mandrakariva ny dinika politika? Na mahatapi-dalan-kaleha, sanatria, ny lalàna, ka voatery hitadiavam-bahaolana hafa tsy fidiny amin’ny fifampidinihana sy fifampierana… politika. Soa ihany, tsy tonga amin’izany izao…
Nanamafy ny filoha Rajoelina…: “Aorian’ny tombana, tsy maintsy hisy ny fanamboarana governemanta” 21/01/2020
Fandaminana ny lapan’ny Fitsarana: itakiana mari-pamantarana ireo manan-draharaha 21/01/2020
Ady mivady tao Andranomanelatra: mitsabo tena eto Antananarivo ilay vehivavy naratra 21/01/2020